चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध भक्तपुरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित – Indepth.com.np
चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध भक्तपुरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित
सशस्त्र अस्पतालमा पीसीआर ल्याब र आईसीयू उद्घाटन
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सकको परिवारका चार सदस्यलाई कोरोना
'नेपाली आमाको स्तनपानको तरिका गलत'
'संस्थाबारे भ्रामक तथा गलत सामग्रीबारे एनएपीएन सचेत'
एग्बोसाद्वारा त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
सामाजिक दूरीको मनोविज्ञान
लकडाउनमै डाइलासिस गराउने बिरामीको चाप
भक्तपुरमा नपामै कोरोना भाइरसको परीक्षण
एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई दुई महिनाको राहत
चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : इन डेप्थ
भक्तपुर । काठमाडौंको जोरपाटीस्थित नेपाल मेकिडल कलेजमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध बुधबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले हातमा कालोपट्टि बाँधेर बिरामी जाँच्नै छाडेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
मेडिकल अफिसर इन्चार्ज डा. आनन्दबाबु ढकालको नेतृत्वमा अस्पतालका चिकित्सकहरुले सेवा बन्द गर्दै चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कारबाही माग गरेका छन् ।
उनीहरुले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही नगरिएसम्म हातमा कालोपट्टि बाँधेर सेवा दिने बताएका छन् ।
नेपाल मेडिकल कलेजमा जेठ १४ गते उपचार गराउन ल्याएका एक बिरामीको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा चिकित्सक दोषी भएको भन्दै बिरामीका आफन्तले हातपात गरेका थिए ।
उक्त घटनाको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ‘चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई धरौटीविना जेल’, ‘दण्डहीनताको अन्त्य गर’, ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध ऐन ल्याऊ’लगायत लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । उक्त प्रदर्शनपश्चात पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु हातमा कालोपट्टि बाँधेर काममा खटिएका छन् ।
विश्वमै कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेका चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार हुनु निन्दनीय भएको मेडिकल अफिसर डा. ढकालले बताए ।
यसअघि पनि धेरैपटक चिकित्सकहरुमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार हुँदै आए पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही नगरिँदा चिकित्सकमाथि आक्रमण तथा दुव्यर्वहार हुन नरोकिएको अस्पतालका सर्जन चिकित्सक डा. उत्सवमान श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
अहिलेको घटनाका दोषीलाई कारबाही नगरिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने अस्पतालका चिकित्सकहरुले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार र चिकित्सकसँग सम्बन्धित संघसंगठनहरुसँग माग गरेका छन् ।
‘नेपाली आमाको स्तनपानको तरिका गलत’
‘संस्थाबारे भ्रामक तथा गलत सामग्रीबारे एनएपीएन सचेत’
एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई घरदैलोमै राहत